Were iPhone ahụ! | Martech Zone
Thursday, June 21, 2007 Sọnde, Septemba 30, 2012 Douglas Karr
Na na na-agaghị ekere òkè, spoofed:
Okpu okpu na- Nsogbu.
“Hà ka obere ụgbọ ala.” Echere m na m nwere ike ikweta. IPhone ahụ zuru oke iji gbuo mmadụ ma ọ bụrụ na a tụbara ya.
Ghara ikwu banyere iberibe iko na-emetụ n'ahụ nke ga-arapara na cornea gị!